Azonao atoro ahy ve ny fitaovana finday finday tsara ampiasain'ny mpivarotra topaza Amazon?
Alohan'ny zavatra hafa, avelao aho hametraka fanontaniana tsotra iray monja - imbetsaka (ohatra, tamin'ny volana farafahakeliny na roa) nijery ny pejy faharoa amin'ny SERP ao amin'ny Google? Heveriko fa tsy tokony ho ampy io tarehimarika io, raha toa ka nijery ny pejy voalohany amin'ny valin'ny fikarohana mihitsy aza ianao. Midika izany fa ny fikarakarana fikarohana teny fototra mety hitranga sy ny fampiasana ny sora-baventy fotsiny dia ny tena mahatonga ny fahasamihafana amin'ny tetikasa maoderina amin'ny aterineto. Toy izany koa ny lisitra vokarinao amin'ny Amazon, ary koa amin'ny ambin'ireo tranombarotra ecommerce malaza. Mazava ho azy, raha te-hijery tsara sy hitan'ny mpihaino marobe amin'ireo mpanjifa mety mbola tsy voavolavola amin'izao fotoana izao - мебель лазурит.
Ary eto rehefa tafiditra ao amin'ny lalao Amazon finday sy soso-kevitra! Eto ambany eto dia handeha haingana aho amin'ny alalan'ireo fitaovam-pikarohana finday sy fanandramana malaza indrindra any Amazon ary ireo rafitra an-tserasera ampiasain'ireo mpivarotra ambony any. Ary tsy ilaina ny milaza fa ny anao irery ihany no manapa-kevitra hoe iza no tokony horaisina - fa mino aho fa ireto manaraka ireto dia mety mifanaraka amin'ny vokatra fanodinan-tsarinao amin'ny Amazon amin'ny toe-javatra rehetra.
Google AdWords - na dia io fitaovana fototra io aza no natolotry ny fikarohana taona goavam-be eran-tany ankehitriny, dia mbola mijanona ho an'ny mpandraharaha amin'ny aterineto mitady ny Amazon tsara keyword finder solution. Ary na dia eo aza ny fitaovana Keyword Planner izay midika hoe ampiasaina amin'ny AdWords, na izany aza dia ity no safidy mety ho anao hanombohana Amazon optimization amin'ny. Satria ity fitaovana maimaim-poana ity dia mora mora ary afaka manome anao haingam-panazavana lehibe momba ny teny na fitenenana fikarohana mila alainao hanamarina, miaraka amin'ny volany fikarohana amin'izao fotoana izao, ny haavon'ny fifaninanana, ary koa ny tena fandinihina sy mahasoa ny fanadihadiana miaraka amin'ny toro-hevitra malalaka sy soso-kevitra maotina. Mazava ho azy, fa ny fototra fotsiny na mety ho-ny fisainana mety amin'ny kickstart ny mpivarotra entana rehetra any Amazonia, ity fanalahidy fanta-daza fanta-daza sy toro-hevitra ity dia nanampy ahy betsaka, ary azo antoka fa mihoatra ny indray mandeha monja.
Moz - Tsy vahaolana avo lenta fotsiny momba ny Search Engine Optimization (SEO), fa afaka dia lasa fitaovana mahomby amin'ny Amazon keyword finder, iray amin'ny iray. Raha ny amiko, dia tiako ny Keyword Explorer, miaraka amin'ny fitaovana ampiasainy, ary koa ny data tena sarobidy mora vakina. Ny fandefasana ny zavatra miaraka, afaka miteny aho fa ity safidy ity dia mety tsara ho an'ny rehetra - ireo manam-pahaizana SEO, ary ireo vaomieran'ny ecommerce vao avy nametraka ny vokatra voalohany Lisitry ny Amazon, eBay, na Walmart.
SEMrush - no fitaovana farany ho an'ny androany izay mety ho mora ampiasaina amin'ny fitaovana finday malaza Amerikana. Ao anatin'ireo sehatra matanjaka indrindra, ity fitaovana fikarohana fikarohana ity dia afaka manampy anao amin'ny teny fanalahidy fohy / lava, ka azo ampiharina amin'ny PPC, ary ny fampielezan-tserasera amin'ny organikaly, ary koa ny zavatra rehetra momba ny fikarohana voalanjalanja izay azonao atao. Ny hany zavatra ratsy momba an'i SEMrush dia ny fanohanana amin'ny fiteny 130 samihafa, ity fitaovana ity dia handoa anao eo ho eo amin'ny iray hetsy dolara isam-bolana, raha vao tapitra ny fe-potoana fitsapana anao. Mazava ho azy fa mety ho toy ny fandaniam-potoana fandaniana, indrindra raha mila fitaovana finday tsotra fotsiny Amazon ianao. Fa ity fitaovana feno manenika manontolo ity dia tena mendrika tokoa, azoko antoka.